काठमाडौँ — नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्र्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको स्थिति गत वर्षहरूमा जस्तै कमजोर देखिएको हो ।
डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डले ८८ अंक प्राप्त गरी सुशासनको उच्च उदाहरण प्रस्तुत गर्दा नेपाल भने ११७ औं स्थानमा समेटिएको छ । १ सय ८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालले १०० पूर्णांकमा जम्मा ३३ अंक प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष पनि ३३ अंक पाएको नेपाल यही स्थानमा थियो ।
५० भन्दा कम अंक पाउने देशलाई अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखिन्छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दक्षिण सुडान देखिएको छ, जहाँ अहिले पनि गृहयुद्ध जारी छ । दक्षिण सुडानले ११ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ ...
मोदीको धार्मिक कूटनीतिले राजनीतिक मुद्दा ओझेल
रोकिएन वैदेशिक रोजगारमा ठगी
२३५ स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक, कहाँ कसले जिते ?
गौतमबुद्धमा आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान
गतिहीन निर्वाचन आयोग, ठप्प देश
७६ स्थानीय तहको परिणाम सार्वजनिक, कुन पार्टीको कति जित ?
रामेछापमा मतगणना स्थलमा हवाई फायरः ४ जना घाइते
धरहरा पुननिर्माणमा ढिलाई, असारसम्म सम्पन्न गर्ने तयारी